ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် သွေးထိုး လှုံ့ ဆော်နေသော EMG မီဒီယာ ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်
The Ten Most Annoying Things Guys Do In Bed
တိရိစ္ဆာန်ပုံ ၉၆၉ တံဆိပ်အား အထွဋ်အမြက် ထားပါသည်ဟု ဆိုသော သူများမှာ ဘုန်းကြီးအစစ်များ ဟုက်ပါလေစနော်
Late-Life Crisis Hits The Over-60s
၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးဦးဆောင်သူ ဦးဂမ္ဘီရ ပြေားတဲ့ ဦးဝိရသူ
Posted: 13 Apr 2013 10:57 AM PDT
Posted: 13 Apr 2013 11:22 AM PDT
"Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang sentiasa menegakkan (kebenaran) kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa. dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS Al-Maidah : 8)
Posted: 13 Apr 2013 07:07 AM PDT
Many have irregular heartbeats that could contribute toastroke By LOH FOON FONG
"This does not include the diabetic group or other chronic diseases," he said inapress conference yesterday after the launch of the Atrial Fibrillation-Strike Out Stroke in Malaysia book for medical care providers.
"This is very high," he said.
In his speech, Health Director-General Noor Hisham Abdullah said the Health Ministry's publication, Health Facts 2012, reported that cardiovascular disease was the leading cause of mortality in hospitals, accounting for 25.64% of all deaths in 2011.
Posted: 13 Apr 2013 08:01 AM PDT
Satu akaun peribadi laman sosial Facebook dengan menggunakan nama 'Mustafa Ali' ditemui dan turut memaparkan pautan sebuah klip video aksi seks dengan tajuk 'Memang Betul Ini Saya'.
Lebih mengejutkan, laman akaun ini baru sahaja diwujudkan sekitar 10 jam lalu selain memaparkan status semasa yang menyatakan 'Mustafa Ali' adalah individu di dalam klip video berkenaan.
"Saya akui yang saya merupakan pelaku dalam klip video tersebut dan kejadian tersebut berlaku dua tahun yang lepas dan saya ingin tegaskan, perlakuan saya tidak menggambarkan perjuangan PAS kerana ia adalah kesilapan peribadi saya," memetik status semasa yang dinaikkan sekitar 10 jam lalu.
Akaun berkenaan didakwa mempunyai 'motif politik' bertujuan memburukkan Setiausaha Agung PAS, Datuk Mustafa Ali kerana dikaitkan sebagai individu di dalam klip video seks berdurasi 11 minit 27 saat yang dinaikkan dua jam lepas.
"Bagi pihak PAS kita tidak mahu terganggu dengan cubaan-cubaan musuh mengalihkan perhatian rakyat terhadap isu yang sengaja diwujudkan dengan pelbagai fitnah menjijikan.
"Dalam mood rakyat ingin membawa perubahan dama Pilihan Raya Umum ke-13 (PRU-13) ganguan sebegini akan muncul.
Saya yakin pelbagai Facebook ciplak direka akan sentiasa wujud," katanya kepada TV Selangor.
"Ini adalah kebiasaan Umno, mereka sanggup guna taktik kotor dengan menyebarkan fitnah… saya adalah mangsa terbaharu fitnah Umno," katanya.
ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် သွေးထိုး လှုံ့ ဆော်နေသော မီဒီယာ။
ELEVEN MEDIA GROUP and ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းရရင်ပြီးရော၊ နာမည်ကြီးရင်ပြီးရောဆိုတာထက် ပိုကျော်လွန်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖွနေတဲ့ Eleven Media Group ဟာ ပြဿနာတွေ ကြီးထွားအောင် ဖန်တီးလှုံ့ ဆော်နေတာမို့မရိုးသားပါ။
ဒီလိုလုပ်နေတာဟာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကျော်ဆန်းနဲ့ အတူ နောက်ကွယ်က ဒီပြဿနာဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေတဲ့လုပ်ရပ်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်လို့သက်သေတစ်ခုအနေနဲ့မီဒီယာလိုင်းကနေ အကွက်ကျကျ စီစဉ်မှုဆိုတာပါဘဲ။
ဒဂုံတက္ကသိုလ် ဥပဒေဌာနက ဆရာတစ်ဦးက အောက်ဖေါ်ပြပါ ရေးသားဖေါ်ပြချက်ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပျက်မှုအစအဆုံးကို အသေးစိတ် သုံးသပ်ကြည့်ရှူနေကြသူတွေအနေနဲ့ဒီပြဿနာရဲ့အခြေခံဟာ ဘယ်သူတွေလည်းဆိုတာ ကြည့်တတ် မြင်တတ်ကြမှာပါ။
ကျွန်တော်က မှန်တာတွေကိုပဲ သိချင်ဖတ်ချင်လို့ EMG ကထုတ်သမျှ edition အားလုံးကို တစ်စောင်မကျန် ( ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး ) စောင့်ဝယ်ဖတ်ကာ Eleven အတွက်ချည်းပဲ တစ်လကို ငွေ ၆၅၀၀ လောက်သုံးနေတဲ့ EMG ပရိတ်သတ် (ဘက်မလိုက်တဲ့ မြန်မာစစ်စစ်) ဒဂုံတက္ကသိုလ် ဥပဒေဌာနက ဆရာတစ်ဦးပါ။ မကြိုက်တာရေးမိလို့ နာမည်ပြောင်းခေါ်လည်း ဘာတတ်နိုင်မှာတုန်းဗျာ။
EMG ဟာ ဘယ်စာစောင် ဘယ်ဂျာနယ်ကမှ ခဏခဏမပြောတဲ့ စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်တွေကို ethic, ethic နဲ့ တဖွဖွပြောတဲ့ဂျာနယ်မို့လည်း သတင်းတင်ပြရာမှာ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အဖြစ်အပျက်၊ ရှုထောင့်မရွေးဘဲ အလယ်ကနေခဲ့တယ်၊ နေနေတယ်၊ နေဦးမယ်လို့ အမြဲယုံကြည်ပြီး EMG ကိုအားပေးခဲ့တယ်၊ ဒါတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်ကထိ EMG က ဒီလိုပဲလို့ထင်ခဲ့တာပဲ။
ဒါပေမယ့် Leading Media တစ်ခုဖြစ်တဲ့ EMG က တောက်လျှောက်ကိုင်စွဲလာတဲ့ ethic policy ကို လွတ်လိုက်ပြီလား၊ အရမ်းသိချင်လာပါတယ်၊ ဘယ်သွားမလဲ Eleven? ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ Eleven? ကိုယ့်မူဝါဒကို လွှတ်ချလိုက်တာလား? လွှင့်ပစ်လိုက်တာလား? ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်ရောက်နေမှန်းတောင် မမြင်တော့တာလား? EMG ကဆရာတွေ ဘာဖြစ်ကုန်တာလဲ? တောက်လျှောက်အကောင်းလား? အစကတည်းက ဒီလိုလား?
အခုရခိုင်ကိစ္စမှာ ဘယ်ဘာသာကိုပဲ ကိုးကွယ်ကွယ်၊ အလယ်က သတင်းသမားသာ တင်ပြတာမမှန်ခဲ့ရင်၊ ဘက်လိုက်ဇောင်းပေး biased လုပ်ခဲ့ရင် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးဆူပူတာ ပိုကြွလာမယ်၊ နှစ်ဖက်လုံး မလိုအပ်ဘဲအသက်စည်းစိမ်တွေ ပိုဆုံးရှုံးမယ်၊ သေးတဲ့အမှု ပိုကြီးလာမယ်ဆိုတာဆိုတာ ဆရာတို့လို တက္ကသိုလ်ကလူတွေ အပါအ၀င် ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်နဲ့ EMG ဝိုင်းတော်သားများအားလုံး၊ စာတစ်ကယ်ဖတ်သူအားလုံးနားလည်မှာပါ။
ပထမ- ရခိုင်အမျိုးသမီး တစ်ဦး မုဒိမ်းကျင့်ခံရပြီး ပစ္စည်းယူ၊ အသတ်ခံရတယ်၊ ဘယ်သူကပဲလုပ်လုပ် ရဲပိုင်တဲ့ criminal case ရာဇ၀တ်မှုသာ ဖြစ်တယ်၊ ဒီရက်ပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ ဆရာဝန်မတစ်ဦး ကို သူ့မိတ်ဆွေက ဓါတ်ဆီလောင်း မီးရှို့သတ်တာ၊ ၁၆ လမ်းက ၁၀တန်းဖြေထားတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် လူသတ်၊ ပစ္စည်းယူ၊ မီးရှို့သတ်ခံရတာ၊ ၁၃ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို လိင်တူ ယောင်္ကျားချင်းမုဒိမ်းကျင့်၊ ပါးစပ်ပိတ်လူသတ်သွားတာ စတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ဘာမှမကွာလှတဲ့ ဖြစ်စဉ်တူတစ်ခုပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းက ဂျပန်မတစ်ယောက်ကို မြန်မာနှစ်ယောက် မုဒိမ်းကျင့်ပြီး သတ်ပစ်တယ်၊ ဥပဒအရနောင်ကျဉ်နေအောင် မြန်မာပြည်မှာ ဒါကိုလက်မခံဆိုပြီး၊ ထိထိရောက်ရောက်သေဒဏ်ပေးဆော်ထည့်တယ်။ ဒီဟာတွေမှာလည်း ဘယ်ဘာသာဝင်ကလုပ်တယ်လို့ ဘယ်မီဒီယာကမှမရေးဘူး၊ ရေးစရာလည်းမလိုဘူး၊ ရဲကအရေးယူ၊ ထိရောက်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ချ၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအရ ပြီးပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်တယ်၊ မြန်မာတည်ဆဲရာဇ၀တ်ဥပဒေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ကိုင်ထည့်လိုက်ရင်ပြီးနေပြီ။
ဘာမှဆက်ဖြစ်စရာမရှိဘူးလေ၊ ဒီဟာလေးကို EMG က စဖွတယ်၊ အင်မတန်ထိလွယ်ရှလွယ်တာကို လွယ်လွယ်ရေးချတယ်၊ မွတ်ဆလင်ကုလား usage သုံးပြီး comment တွေရေးခွင့်ပေးတယ်၊ ဘယ်ဘာသာဝင်လို့ ရေးကတည်းက သွားပြီ၊ တင်ပြတာမမှန်တော့ဘူး၊ နောက်ဆက်တွဲ ဘာဖြစ်လာမလဲ သိသင့်တယ်၊ သိသိကြီးနဲ့လွယ်လွယ်ရေးချတယ်၊ လွယ်လွယ်ဖတ်တဲ့ လူအုပ်စုတစ်စုကသွေးကြွတယ်၊ ရပ်ရန် မဟုတ်တဲ့ ဆက်ရန်တွေဖြစ်လာတယ်၊ Eleven ကဘာဖြစ်စေချင်တာလဲ? ဆက်ပြီးတော့ သတ်ကြစေချင်တော့…
ဒုတိယ- တောင်ကုတ်မှာ လူ ၁၀ယောက်(ဆရာကတော့လူလို့ပဲ မြင်မိလို့၊ ဥပဒေအရတော့ နိုင်ငံသားကဒ်တရားဝင်ရှိတဲ့ လက်နက်မဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀ယောက်) ကို အခြားသံတုတ်၊ တုတ်ကိုင် နိုင်ငံသား ၂၀၀ ကျော်က မသေမချင်း ဦးနှောက်တွေပွင့်ထွက်တဲ့ထိ ရည်ရွယ်ပြီးစောင့်ပြီးဝိုင်းရိုက်သတ်တယ်၊ သူတို့ ဘာလုပ်မိလို့များဒီလိုတောင် လုပ်ခံထိရတာလဲ၊ သူတို့ကတရားခံတွေမို့လား၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလောက်ကြီးတောင် ဥပဒေမဲ့လုပ်ရသလား၊ ဘာသာရေးအဆုံးအမရှိသူတိုင်း၊ တရားရှိသူတိုင်း ယဉ်ကျေးပြီးသူတိုင်း ဒီဖြစ်ရပ်ကိုလက်ခံစရာမရှိပါဘူး၊ သူငယ်ချင်း နိုင်ငံခြားက တက္ကသိုလ်ဆရာတွေကတောင် phone နဲ့ mail နဲ့ မေးတယ်၊ ဘယ်ကစလဲ၊ ပြောပြတော့ ဒီကိစ္စကသေးသေးလေးပဲ၊ ဒီလောက်ကြီးသွားရသလား၊ မင်းတိုို့လိုဘာသာတရားလေးစားတဲ့နိုင်ငံမှာ ဒီလိုဥကဒေမဲ့လွယ်လွယ်လေးသတ်တာတွေ ရှိနေပြီလားမေးတယ်၊ ဆရာ့မှာ ရှက်စိတ်အပြည့်နဲ့အဖြေမရှိခဲ့ဘူး၊ ဆရာက ဥပဒေသမားမို့ ဥပဒေရှုဒေါင့်ကပဲကြည့်တတ်တယ်။ လူဆယ်ယောက်သေတာကို နောက် လူတွေကပျော်နေရလောက်အောင် မြန်မာတွေကစိတ်ဓါတ်က ဆိုးဝါးအကြမ်းဖက်စိတ်ရှိခဲ့လို့လားဗျာ။ EMG လုပ်ရပ်က နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာသိက္ခာကျစေတာပေါ့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို နိုင်ငံခြားက လာရောက်လည်ပတ်ချင်သူ၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံချင်သူတွေ ဘယ်လာရဲတော့မလဲ၊ မျက်တောင်တဆုံးပဲ ဆက်ကြည့်တတ်တော့ EMG က ဆက်ဖွနေတယ်၊ ဆက်ဆွနေတယ်၊ ဘယ်ဂျာနယ်ကမှ ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် သတိကြီးကြီးထား မတိမ်းစောင်းစေဘဲ မဖွဘဲရေးတယ်။
The Voice တို့လို့ဂျာနယ်အကြီးတွေတောင် ပြသနာပိုကြီးထွားမသွားစေချင်လို့ media သမားပီပီသသနဲ့ comment တွေကိုပိတ်ထားတယ်၊ Eleven ကတော့ လွယ်လွယ်ရေးခွင့်ပေးလို့ comment တွေ အပြန်အလှန် ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဆက်ရေးကြပြန်တယ်၊ ဆရာသိသလောက် ဘယ်မြန်မာလူမျိုးမှမရိုင်းပါဘူး၊ Eleven Site ထဲမှာ ဘယ်သူမှဖတ်လို့မရလောက်အောင် ဆဲဆိုနေတာတွေက မြန်မာ reader တွေ ရေးတင်တာလို့ ကျွန်တော်တော့မယုံကြည်ဘူး။ EMG ကလူတွေပဲ ပြသနာကြီးထွားလာအောင် comment တွေထိုင်ပေးနေသလား ထင်ရလောက်အောင်ပါပဲ။ Eleven ကဘာဖြစ်စေချင်တာလဲ? ဆက်ပြီးတော့ သတ်ကြ ၊ ဆူပူကြဖြစ်စေချင်တော့…
တတိယ- မောင်တောကိစ္စဖြစ်လာတယ်၊ တစ်ဖက်ဖက်ကို အလွန်အကျွံ နှိပ်ကွတော့ ပြန်ကြွတတ်တာ မသိလို့လား၊ comment တွေ၊ သတင်းတွေ တစ်ဖက်သတ်ဖြစ်ကုန်တယ်၊ တောင်ကုတ်မှာ လူ ၁၀ယောက်ကို မသေမချင်း ဦးနှောက်တွေပွင့်ထွက်တဲ့ထိ ရိုက်သတ်ခံရတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုတောင် မတင်ခဲ့တဲ့ Eleven က မောင်တောမှာ မီးရှို့တာ၊ အပြန်အလှန်ချကြတာတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ update လုပ်တင်ပေးလာတယ်၊ အာဃာတလား၊ racists လား၊ သတင်းသမားလား၊ လူဖတ်များ စောင်ရေများ စေချင်တာလား၊ ကြားဝင်လှုံဆော်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ဘာလို့ရွေးလုပ်ချင်ရသလဲ၊ ဘာတွေကိုအမြတ်ထုတ်ချင်နေတာလဲ Eleven? ၊ အလယ်ကလူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်က ဒီလိုပဲလား? တစ်ရက်ရက်မှာ EMG ဟာ ဒီကိစ္စကို တာဝန်ယူရမှာပါ။
စတုတ္တ- ဒီနေ့ Eleven ရဲ့လုပ်ရပ် (၃) ခုက စာဖတ်သူတွေကို စိတ်အပျက်စေဆုံးပါပဲ၊ သတင်းခိုင်မာမှုကိုတောင် မစောင့်နိုင် EMG ရဲ့ ဖွရရင်ပြီးရော မူဝါဒကို သေချာမြင်လာရပါတယ်၊
၁။ GTC ကျောင်းသားတစ်ဦး စစ်တွေမြို့လယ် အားကစားရုံနားမှာသေတဲ့ကိစ္စ၊ ဘာကြောင့်သေရသလဲ အတိအကျမသိသေးပါဘူးတဲ့၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကဆရာတွေတောင် စစ်တွေတက္ကသိုလ်က အသိတွေကို သာမန်ဖုံးလေးတစ်ချက်ဆက်တာနဲ့တင် အကြမ်းဖျင်း၊ ဟုတ် မဟုတ်သိနိုင်တဲ့ကိစ္စပဲဟာ၊ အတိအကျမသိသေးရင်မရေးပါနဲ့လား ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်နဲ့ EMG ဝိုင်းတော်သားများရယ်၊ ဆရာတို့ဟာကလည်း ဖွလိုက်ရရင်ပြီးရော လုပ်လိုက်ပြန်ရော၊ ဖြစ်တာက အဆောင်ပိုင်ရှင်နဲ့ GTC ကျောင်းသား ရခိုင်ချင်း ပြသနာဖြစ်လက်လွန်ပြီးသတ်မိတဲ့ကိစ္စ၊ မောင်တောလူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး သတင်းနဲ့ တစ်မျက်နှာတည်းမှာထားပြီး ရောသမမွှေလိုက်တယ်၊ လွယ်လွယ်ဖတ်မိတဲ့ လူအုပ်စုတစ်စုကို သွေးကြွစေပြန်တယ်၊ ကျောင်းသားအသတ်ခံရတယ်၊ ကုလားတွေကြောင့်၊ သတ်ပစ်ကြ၊ သေကျေမှုတွေဆက်ဖြစ်ကြပြန်ရော၊ ဘယ်သူ့လက်ချက်မှန်းမသိရသေးဘဲ ethic ဆရာကြီးတွေက ethic လုံးဝမရှိဘဲ လက်သွက်သွက်ရေးချနိုင်တာကို( အံ့သြမကုန်နိုင်ဖွယ် ) တွေ့ရပြန်တယ်။ စာတစ်ကယ်ဖတ်တဲ့ သူတွေကို လိမ်လို့မရပါဘူးဗျာ၊ အေးအေးချမ်းချမ်းနေလိုသူတွေ EMG ကြောင့်ပူလောင်လာရပြန်တယ်။
၂။ အစိုးရထုတ်သတင်းစာ တစ်စောင်မှာမှ မပါသေးတဲ့ ခရေကုန်းဘောင်ရွာကကျောင်းဆရာမနှစ်ဦး ဒါးဒါဏ်ရာတွေနဲ့ အသေရောက်လာတဲ့ သတင်းဦး၊ သတင်းထူးကြီးကလည်း ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်နဲ့ EMG ဝိုင်းတော်သားများအားလုံး တာဝန်ကြေကြေ အတိုင်အဖောက်ညီညီ လျှောက်ဖွလိုက်တာပဲဖြစ်နေပြန်တယ်၊ လုံးဝမသေချာဘဲနဲ့၊ လုံးဝမမှန်ဘဲနဲ့ Eleven က ဆူပူအုံကြွမှုတွေဖြစ်၊ စစ်တပ်က ကိုင်မှ၊ အာဏာသိမ်းမှရမယ်လို့၊ နှပ်ကြောင်းပေးချင်တာလား၊ တစ်တိုင်းပြည်လုံးက အသေအကျေဒုက္ခခံ၊ အသက်ထောင်သောင်းများစွာပေးပြီး စစ်ဖိနပ်အောက်ကရလာတဲ့ ဘာမှသက်တမ်းမကြာသေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကလေးကို အသေသတ်၊ ပြောင်းပြန်လှန်ချင်နေတာလား?၊
ကလောင်သွားထက်တာကို အမြတ်ယူချင်တာလား၊ လုပ်သူ ခံရသူ ကြားမှာ အမြတ်ထွက်သူရှိတာ မဆန်းပေမယ့် စတုတ္ထ ဒေါက်တိုင်Eleven ကတော့ နောက်ပြန်လှည့်ဖို့ ဘေးတီးပေးနေ၊ အဆင်းဘီးတပ်ပေးနေသလိုပါပဲ၊ လူတစ်ဖွဲ့ကနောက်လူတစ်ဖွဲ့ကို ဘာကြောင့်ပဲသတ်သတ်၊ သူ့ငရဲ သူသွားမှာပါပဲ၊ ဘယ်ဘာသာတရားမှာမဆို လူမသတ်ရဆိုတာ ပညတ်ပြီးသားပါ။ ကုလားကိုသတ်တယ်ပြောပြော၊ ရခိုင်ကိုသတ်တယ်ဆိုဆို၊ လက်စားချေတယ်ပြောပြော၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး လူသတ်ပါ၊ ကိုယ်သေတဲ့အချိန်မှာ တစ်ဦးချင်းတစ်ယောက်ချင်း သွားရတဲ့ဘုံအဆင့်ဆိုတာ ကျိန်းသေပေါက် ဘာသာတရားတိုင်းမှာရှိပြီး သတ်မှတ်ပြီးသားပါ။ဘာကြောင့်များ ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်နဲ့ EMG ဝိုင်းတော်သားများအားလုံး လူတွေအချင်းချင်း(ဆရာကတော့ လူလို့ပဲ မြင်မိလို့ ၊ ကုလား၊ ရခိုင် ၊ တရုပ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ခရစ်ယာန်၊ အသားအရောင်၊ ယုံကြည်တာပဲကွာမယ်) သတ်ဖြတ်သေကျေတာတွေဖြစ်အောင် ဘာလို့ မမှန်သတင်းတွေနဲ့ လမ်းကြောင်းပြောင်းလှုံဆော်ချင်နေရတာလဲ၊ ကုလားတစ်မျိုးလုံးကို သတ်တော့ရော၊ ရခိုင်တွေသေတော့ရော ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်နဲ့ EMG ဝိုင်းတော်သားများအားလုံး ဘာတွေများစီးပွားရေးအမြတ်ထွက်လာမလဲ၊ တစ်ခုခုကို ခုတုံးလုပ်ပြီး နင်းတက်ချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်က EMG ရဲ့ မူဝါဒလား?
၃။ မောင်တောက ကန်တော်ကြီးသောက်ရေကန်ကို ဘင်္ဂလီတွေကအဆိပ်ခပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ၊ ဒီသတင်းကိုအတည်ပြုဖို့ EMG ကအတည်ပြုနိုင်ဖို့ဆက်သွယ်နေပါပြီတဲ့၊ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ တကယ့်ရှက်စရာပါ။ ၈၈ အရေးအခင်းက ထွက်ခဲ့တဲ့စာစောင်တွေလောက်တောင် Eleven အဆင့်မရှိတော့ပါ။အတည်မပြုရသေးတာကိုဘာလို့ရေးရတာတုန်း၊ ethic တွေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ၊ စိတ်တော့မဆိုးပါနဲ့၊ ဆရာကတော့ ဥပမာသတင်းလေးတစ်ခုရေးမိတော့မယ်၊ ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်နဲ့ EMG ဝိုင်းတော်သားတွေ မနေ့ညက တောင်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်းက EMG ရုံးချုပ်မှာ မကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေအုပ်စုလိုက်နဲ့ ပါတီပေးညလုံးပေါက်မူးရူးကခုန်ပျော်ပါးပြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်၊ ဒီသတင်းကိုအတည်ပြုဖို့ EMG ကိုဆက်သွယ်နေပါတယ်။ ဒီလိုဆိုဘာဖြစ်လာမလဲ၊ ကိုယ့်ဆရာတွေ မပျော်တော့တာသေချာပြီ။ ဒီလိုလေးရေးလိုက်မိတာတောင်မှ ကိုယ့်ဆရာတွေ ကျွန်တော့်ကို သတ်ချင်လောက်အောင် ဒေါသထွက်စေ၊ စိတ်ကြွစေရင် သောက်ရေကန်ကို အဆိပ်ခပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ အတည်မပြုရသေးတဲ့ သတင်းကြီးကလည်း အခုဖြစ်နေကြတဲ့ ဘက်နှစ်ဘက်ကို ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ဒေါသတွေဖြစ်စေ၊ သေကျေစေမလဲ မစဉ်းစားတတ်တာလား?၊ ဖွလိုက်ရရင်ပြီးရောလား၊ မီဒီယာတစ်ခုရဲ့ဖြောင့်မတ်မှု၊ သတင်းတစ်ခုရဲ့ ခိုင်မာတိကျမှုဟာ အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်စေနိုင်သလို၊ သေကျေစေနိုင်ပါတယ်။ ဥပဒေသမားတစ်ဦး နဲ့ သတင်းသမားတစ်ဦးမှာ အခြေခံအကျဆုံးက ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုရှိခြင်းပါပဲ၊
အခုလို Online မှာ Open Source သတင်းတွေ အများကြီးရနိုင်ချိန်မှာတောင် သတင်းအမှားတွေ၊ သတင်းအလိမ်တွေ၊ ဒီလိုလေးတော့ဆော်လိုက်ဦးမှ အောက်တန်းကျစိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ လုံးဝတည်ငြိမ်အေးချမ်းဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ဒေသတစ်ခုကို ၁၀ ရက်အတွင်း လုံးဝဆိုးရွားသွားစေလောက်အောင် လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းတစ်ခုပေါ်ထွက်လာအောင်နောက်ကွယ်ကနေ ဘေးတီးလှုံဆော်ဖန်တီးချင်တဲ့မူဝါဒရှိနေတာ၊ စာမဖတ်ဖြစ်ကြတဲ့လူအများစုကို မျိုးချစ်စိတ်အရင်းခံသယောင် စည်းရုံးလှုံဆော် ဆူပူစေတာ၊ ရလဒ်က ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ လူနေမှုပုံရိပ်တွေ ကျဆင်းစေတာ၊ စီးပွားရေးတွေ ပုံမှန်မဖြစ်စေတော့တာ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသွားစေတာ၊ ပေါ်လာတဲ့အမြတ်က EMG ကိုပိုမိုထင်ပေါ် စောင်ရေတက် အရောင်းကောင်းစေချင်တာ၊ EMG က ငါတို့ ဖက်ကမျိုးချစ်တွေ Patriotic တွေ လို့ ထင်ရအောင်လုပ်ပြပြီး နိုင်ငံရဲ့ လူတိုင်းရဲ့ လက်ရှိပန်းတိုင် နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်စားနေကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကိုေ၀၀ါးလမ်းကြောင်းပြောင်းပစ်နေတာ၊ ဘာမှစာဖွဲ့စရာတောင်မရှိ (ကုန်ကုန်ပြောရရင် တစ်ရက်တိုက်စရာတောင်မရှိ၊ နေ့ဝက်နဲ့ အပြီးရှင်းပစ်လို့တောင်ရ) တဲ့ လူလက်တစ်ဆုပ်စာကြောင့် စစ်တပ်က၀င်လာမှသာ၊ တပ်ဝင်လာပါတော့လား၊ စစ်တပ်ကသာ ကယ်တင်နိုင်တော့မယ်လို့ တစာစာအော်ခေါ်ပြီး အမြင်နောက်ပြန်ဆွဲနေတာ၊ နိုင်ငံပုံရိပ်ကို အဆုံးထိဆွဲချပစ်တာတွေဟာ မြန်မာ Journalist တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရှက်တတ်ရင် ရှက်ပြီးသေပစ်ချင်စရာပါပဲ။ စစ်တပ်ပိုင် မြ၀တီ Eleven လို့တောင်အမည်ပြောင်းပေးရတော့မှာပါ။
ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်နဲ့ EMG ဝိုင်းတော်သားများအားလုံးသိသင့်တာက အမှန်သတင်းမီဒီယာတွေဟာ (နောင်အနာဂတ်တကယ်ရှိတဲ့) နိုင်ငံတိုင်းမှာ အသက်သွေးကြောပါပဲ၊ နောင်အနာဂတ် နိုင်ငံတော်သစ်ဆီကို လူတိုင်းလူတိုင်းချွေးသံ၊ အားမာန်အပြည့်နဲ့ ချီတက်နေချိန်မှာ လိမ်ဆင်မမှန်သတင်းအပြည့်နဲ့ ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်နဲ့ EMG ဝိုင်းတော်သားများရဲ့ နောက်ပြန်ဆွဲချ၊လှုံဆော်ရန်တိုက်ပေးနေတဲ့လုပ်ရပ်က ဆရာတို့ တက္ကသိုလ်အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက်တော့ရှက်ဖွယ်လိလိပါ။ ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော မှန်တာတွေကိုပဲ သိချင်ဖတ်ချင်လို့ Eleven အတွက်ချည်းပဲ တစ်လကို ငွေ ၆၅၀၀ လောက်သုံးနေတဲ့ ဆရာကတော့ နောက်လကစပြီး တစ်ခြားဂျာနယ်ပြောင်းဖတ်တော့မယ်ဗျာ။
ရွှေမြန်မာတွေ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ကြပါ။ ထလော့၊ မြန်မာ၊ မြန်မာ၊ ထလော့၊
တစ်ရက်ရက်မှာ EMG ဟာ ဒီကိစ္စကို တာဝန်ယူရမှာပါ။
(ရေးသားသူ – ဒဂုံတက္ကသိုလ် ဥပဒေဌာနက ဆရာတစ်ဦး။
Posted: 13 Apr 2013 05:04 AM PDT
Dari Anif Wahyudiyanto
Semarang dan Sekitarnya, Jawa Tengah, Indonesia
Konfirmasi bahwa Anda mengenal Anif
Anda menerima email Undangan untuk Terhubung. Berhenti berlangganan email ini
©2012, LinkedIn Corporation. 2029 Stierlin Ct. Mountain View, CA 94043, USA
The following post is taken from THIS LINK. CLICK HERE and don't forget to hover over the arrows for the next slides.
*Posted for laughs with no intention to offend anyone. Havealovely day.
ယခု အခါ ကိုရဲမင်းဦးနှင့် ၄ယောက်အား စစ်ဆေးနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။…. ထိုသို့ ဘုရားပုံတော်နှင့် တိရိစ္ဆာန်ပုံ ပြောင်းလဲလိုက်သော ၉၆၉ တံဆိပ်အား အထွဋ်အမြက် ထားပါသည်ဟု ဆိုသော သူများအားလုံး မှာ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်အစစ်များ ဘုန်းကြီးအစစ်များ ဟုက်ပါလေစနော်။….
၉၆၉ က ဘာသာရေးမဟုက်ပါ။ ပြည်သူတွေ("ကိုး"ကွယ်ရာ)ကို အရင်းတည်၊…… (လူမျိုးရေး)နှင့် "ခြောက်"လှန့်၊… နောက်ဆုံးတော့ (နိုင်ငံတော်)ကို အား"ကိုး" လါရရမည်ဟု ဖော်ဆောင်ထားတဲ့ ဆောင်ပုဒ် တစ်ခုပါ။..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခြင်္သေ့ပုံဖြစ်နေလို့ပါ။……..
(စာစောင်တွင် တရားစွဲမည်ဟု ပါလါသောအခါ)…….
မြန်မာပိုက်ဆံများထဲမှ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း၏ဓါတ်ပုံအား တိရိစ္ဆာန်ပုံများနှင့် အစားထိုး လဲလိုက်သည့်ပုံစံအတိုင်း ဘယ်ဓမ္မာရုံ သွားသွား တွေရှိ့ရသော ဗုဒ္ဒဘာသာ အထွဋ်အမြတ်ထားရာ ၂၄ပစ္စည်း ပုံတော်အား စော်ကားစွာဖြင့် ဗုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရား ပုံတော်အစား တိရိစ္ဆာန်ပုံနှင့် ပြောင်းလဲ လိုက်သော 969 အမှက် အသားပါ တံဆိပ်ကို ဂုဏ်တော် ဘယ်နှစ်ပါးဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်လျှင် ဦးထိပ်ထားရမည်ဟု စည်းရုံး၍ အမျိုးသားရေး အကြောင်းပြုကာ အကြမ်းဖတ်မူ့များ ဖြစ်ပေါ်စေရန် သွေးဆောင် လှုံ့ဆော်မူ့ဖြင့် မကြာခင် အကုန်ဖမ်းမှသာ တိုင်းပြည် အေးချမ်းမည် ဖြစ်သောကြောင့် အစိုးရမှ ဖမ်းဆီးရန်အတွက် သေချုာစွာ စီစစ် စဉ်းစား စီစဉ် နေကြပါသည်။…
Posted: 13 Apr 2013 02:08 AM PDT
"Sepatutnya amalan politik kita lebih matang dari segi nilai kemanusiaan.
"Mana-mana ahli politik tak bermoral dalam apa jua konteks kita perlu tolak daripada dijadikan pemegang amanah," katanya.
Posted: 12 Apr 2013 10:06 PM PDT
On 09.04.2013, the Federal court agreed to hear arguments onaState's right to restrict freedom of expression in Malaysia. Here'sapodcast of yours truly speaking on the issue with BFM. From 17:28 onwards.
The State of Adoption in Malaysia Early this month, The Star reported that the police had...
Posted: 12 Apr 2013 09:52 PM PDT
Bereavement was the most common crisis that people in their sixties experienced
A third of people in their sixties go througha"late-life crisis", psychologists suggest.
Just under 300 people aged over 60 in the UK completed an online survey for the
၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးဦးဆောင်သူ ဦးဂမ္ဘီရ ပြေားတဲ့ ဦးဝိရသူ။
by M Ban Du La (Notes) on Friday, April 12, 2013 at 4:13am
၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးဦးဆောင်သူ ဦးဂမ္ဘီရက "ဦးဝီရသူကို ဖမ်းဆီးသင့်တယ်၊ သူဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ လွဲချော်နေတယ်၊ သူဟာ သံဃာတော်တစ်ပါးပါ၊ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်တယ်၊ အတော်အန္ထရာယ်များတယ်၊ သူဟာ ပိုပိုပြီးကောက်ကျစ်ပြီး အကြင်နာတရာမဲ့နေတယ်။" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ဦးဂမ္ဘီရက မွတ်စလင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး အယူဝါဒကို အစိုးရကသာ ရပ်တန့်နိုင်မည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
"အရင်တုန်းက ဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံရေးတို့ ဒီမိုကရေစီတို့အကြောင်းပြောရင် အစိုးရက တားမြစ်ခဲ့တယ်။ အခုကျတော့ ဒီလိုမျိုး အတို့အထောင်ဟောပြောမှုတွေကိုကျတော့ မတားဘဲ ထောက်ခံအားပေးနေတယ်။" ဟု ဦးဂမ္ဘီရက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဦးဝီရသူဟာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီး သူ့လက်အောက်မှာ လူပေါင်း(၂၅၀၀)လောက်ရှိတယ်။ သူ့ကို ဘယ်သူကမှ ပြန်မပြောရဲဘူး၊ အစိုးရကသာ အရေးယူသွားဖို့လိုတယ်ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
"မိတ္ထီလာမှာ လူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်နေတာကို အာဏာပိုင်တွေဟာ ရပ်တန့်ဖို့နည်းနည်းလေးပဲလုပ်တာကို အံ့သြစွာတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ သူတို့ဟာ အထက်က အမိန့်လာဖို့ကိုစောင့်နေကြတာ၊ အဲဒီ့အမိန့်က နောက်ဆုံးအထိ မလာဘူး" ဟု မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးလှသိန်းက ပြောပြခဲ့သည်။
အကြမ်းဖက်အုပ်စုကို အင်အားသုံး၍ ထိန်းသိမ်းရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားသော်လည်း နံပါတ်တုတ်ကိုပင် အသုံးမပြုရန် မှာကြားခြင်းခံရကြောင်း အထက်တန်းရဲအရာရှိတစ်ဦးက ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ယခုဖြစ်သည့်အကြမ်းဖက်မှုသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်က ရခိုင်ပြည်၌ဖြစ်ပွားသော အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်ကြောင်း ရိုက်တာသတင်းဌာနက ဆန်းစစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင် စစ်တပ်၏ပယောဂမကင်းကြောင်းနှင့် ပြည်နယ်၏ အင်အားကြီးနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်မျက်ကန်းမျိုးချစ်များက ဦးဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းကြီးများကပင် ပြောဆိုကြကြောင်း၊ ဒေသခံလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ဆိုသည်။
ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ ရဲအရာရှိတစ်ဦးဟာ လူစုနဲ့ အပေးအယူလုပ်ခဲ့တယ်။ "ရဲတွေက လူအုပ်ခွဲတဲ့အချိန်မှာ အဖျက်သမားတွေ ဗလီကိုဖျက်ဆီးဖို့ မိနစ်(၃၀)လောက် ခွင့်ပြုခဲ့တယ်" ဟု မျက်မြင်သက်သေ (၂)ဦး၏ အဆိုအရသိရှိခဲ့ရသည်။ "နာရီဝက်အတွင်းမှာပဲ ဗလီကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်" ဟု ၎င်းမျက်မြင်သက်သေတွေ့ရှိသူများက ပြောပြခဲ့သည်။
ရိုက်တာသတင်းဌာနက အဆိုပါ အပေးအယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရဲများအားမေးရာ ၎င်းတို့က လုံးဝငြင်းခဲ့သည်။
မင်းလှမြို့မြောက်ပိုင်းရှိ လူဦးရေ (၁၀၀၀၀၀)ခန့်ရှိ ကြို့ပင်ကောက်မြို့တွင်လည်း (၂)ရက်အရင်က သံဃာတော်တစ်ပါးက ၉၆၉ တရားပွဲပြောပြီးနောက် လူတစ်စုသည် ဗလီ(၁)လုံးနှင့် အိမ်(၂၃)လုံးအား ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြန်သည်။
ဦးဝီရသူက မိတ္ထီလာရှိသံဃာတော်များအား မတိုက်ခိုက်ရန်တိုက်တွန်းကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ သူသည် တစ်နေရာ၌လည်း ကားခေါင်မိုးပေါ်မှ မိန့်ခွန်းများလည်းပြောခဲ့သေးသည်။ သို့ရာတွင် သူ့ပြောကြားမှုသည် လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါ။
ဦးဝီရသူသည် ၉၆၉ ကို ဖြန့်ရုံသာမက မွတ်စလင်မ်တို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား ဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်းမှေးမှိန်အောင် ပြုနေသည်ဟု သွေးခွဲစကား ပြောခဲ့သည်။
"မွတ်စလင်မ်တွေဟာ ချမ်းသာသထက်ချမ်းသာလာပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတွေကိုလက်ထပ်၍ အစ္စလာမ်ဘာသာထဲ သွတ်သွင်းတယ်၊ သူတို့စီးပွားရေးတွေက ပိုပြီးကြီးလာပြီး မြေကွက်တွေ အိမ်တွေဝယ်တယ်၊ ဒါဟာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို နည်းပါစေလာတဲ့သဘောပါပဲ၊ ပြီးနောက် ဦးဇင်းတို့ ဘုရားကျောင်းတွေလို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာမဟုတ်ဘဲ ဗလီတွေကို တရားမ၀င်ဆောက်တယ်၊ ဗလီများတော့ ရန်သူတွေများတာပေါ့လို့ဆိုနိုင်တယ်" ဟု ဦးဝီရသူကပြောကြားခဲ့သည်။
၁၃ ရာစု၌ အစ္စလာမ်ဝင်ရောက်လာပြီးနောက် ဖြစ်ပွါးခဲ့သော အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ လမ်းကြောင်းအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်သွားမည်ကို ဦးဝီရသူက စိုးရိမ်သည်။
ကျောက်ဆည်မြို့၌ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူရမ်းကားတစ်စုကြောင့် မွတ်စလင်မ် (၁၀)ဦးထက်မနည်း သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း U.S State Department က ဖော်ပြခဲ့သည်။
တိုင်းမှူးကသာ ပြတ်သားသော အမိန့်အနည်းငယ်ပေးခဲ့လျင် မိတ္ထီလာနှင့် အနီးတ၀ိုက်ရှိ စစ်သားထောင်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြု၍ သွေးချောင်းစီးအကြမ်းဖက်မှုအား ချက်ချင်းရပ်တန့်သွားနိုင်ကြောင်း NLDမှ ဦးဝင်းထိန်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒါဟာ စစ်ပွဲတစ်ခုလိုပါပဲ၊ ပထမတော့ လူအင်အား ဘယ်လောက်ရှိမယ် ဘယ်လိုကြီးထွားလာမယ်ဆိုတာကို မခန့်မှန်းနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ အကာအကွယ်တွေတော့ရှိရမယ် ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့သည်။
၈၈ကျောင်းသားဟောင်းမင်းကိုနိုင်သည် ၎င်းအကြမ်းဖက်မှုကာလတွင် မိတ္ထီလာသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ "လူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ပြီးနောက်မှာ အဲ့ဒီ့လူစုဟာ စနစ်တကျလေ့လာပြင်ဆင်ထားပုံရတယ်၊ ဆဲလ်ဖုန်းကိုယ်စီနဲ့ ဘုန်းကြီးတွေဟာ မြို့ပြင်ထွက်ပြီး ကားတွေကို စစ်ဆေးတယ်၊ အဆောက်အဦးတွေကို ဘူလ်ဒိုဇာသုံးပြီး ဖြိုတာကို တွေ့ရတယ်၊ သာမန်လူဟာ ဘယ်လိုလုပ် ဘူလ်ဒိုဇာ သုံးတတ်မှာလဲ" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ်က အဆိုပါအကြမ်းဖက်မှုတွင် အာဏာပိုင်များ ပါဝင်ပက်သက်နေသည်ဟုဆို၏။ စစ်တပ်နှင့် ရဲများသည် ၎င်းတို့မျက်စိရှေ့တွင် ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်မှုများကို တွေ့လျက်သားနှင့် ရပ်ကြည့်နေခဲ့ကြကြောင်း၊ ၎င်းမှာ အာဏာပိုင်အချို့၏ ပါဝင်ပက်သက်မှုရှိကြောင်း (သို့) ယင်းမတရားအကြမ်းဖက်မှုကို တိတ်တဆိတ်နောက်ကွယ်မှ ကူညီအားပေးမှု ရှိနိုင်ကြောင်း မစ္စတာကင်တားနားက သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ပြန်ကြားရေးအရာရှိနှင့် ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ္ဋ်က အဆိုပါအကြမ်းဖက်မှုတွင် အစိုးရမှပါဝင်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ငြင်းဆိုကာ ၎င်းပြောဆိုချက်သည် အခြေအမြစ်မရှိ စွပ်စွဲချက်သာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းအကြမ်းဖက်မှုများသည် ၂၉ရက်နေ့အထိ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းရှိ မြို့ရွာ(၁၅)ခု၌ မွတ်စလင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်မှုများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရသည်။
ဧပြီလ(၂)ရက်နေ့ကလည်း ရန်ကုန်ရှိ ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းတစ်ခု၌ မွတ်စလင်မ်ကလေး (၁၃)ဦး မီးလောင်သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်သူတုိ့၏ ဆွေမျိုးများက ၎င်းသည် ရှို့မီးဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်။ မီးတောက်လောင်စဉ်တွင် ဆီအိုင်နေသော ကြမ်းပြင်ကြောင့် ချော်လဲခဲ့ရကြောင်း ကိုယ်တွေ့ကြုံရသူများက ပြောဆိုကြသည်။ သို့သော် ရန်ကုန်အာဏာပိုင်များက ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတော်တဆမှုသာ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အကြမ်းဖက်မှုကြီးမှာပြုပြင်တည်ဆောက်ရေးသမားတို့ကို နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်စေရန် စံနစ်ဟောင်းအင်အားစုများမှ ဖန်တီးချက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်ဟုအချို့ကအမြင်ရှိကြသည်။ သို့တည်းမဟုတ် ခေတ်ဟောင်းအာဏာရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်နေသော ခရိုနီများက မွတ်စ်လင်မ်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကို ကန်ထုတ်၍ မိမိတို့စိတ်ကြိုက်စီးပွားခွင်ကို ဖန်တီးလိုမှုလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အောင်မြင်သည့် မွတ်စ်လင်မ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမှ "ဒီကိစ္စမှာ ဘာသာရေးနဲ့ စီးပွားရေးအငြိုးအတေး နှစ်မျုိုးလုံးပါဝင်နေတယ်" ဟု ယူဆသုံးသပ်ခဲ့သည်။ ထိုသူကဲ့သို့ပင် မွတ်စ်လင်မ်များစွာတို့သည် မိမိတို့၏ဘိုးဘေးဘီဘင်မျိုးဆက်များကို ပြောပြနိုင်ကြသည်။ အခြားသူများအတိုင်း သူသည်လည်း အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းသော လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိတ်ဆွေများစွာရှိရာ ၄င်းတို့အနက် သူ့အား အကြမ်းဖက်မှုမှလွတ်မြောက်အောင် ကူညီခဲ့ကြပေသည်။
MM Chronicle Rohingya Arakan's status.
Posted: 12 Apr 2013 09:43 PM PDT
တပ်ထားတဲ့ ပုဒ်မတွေက လုယက်မှု၊ ပြင်းထန်နာကျင်စေမှုနှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ သာမာန်ပြတ်ရှဒဏ်ရာ ရရှိစေမှုနှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု။ ဘာတွေလဲ။ လုယက်မှုတဲ့ ဆိုင်ရှင်က လုယက်မှု ကျူးလွန်တယ်ဆိုပါလား။ ပူးပေါင်းကြံစည်မှု ဆိုတာတွေကရော ဘာတွေလဲ။ ဒဏ်ရာရတာကရော ဘာလို့ နှစ်မှုလဲ။ အံ့ဩစရာပဲ။
ကျနော် ဥပဒေအကြောင်း တော့ မသိဘူး။ သိထားတဲ့ အမှုတစ်ခုနဲ့ ယှဉ်စဉ်းစားကြည့်မယ်။ ထက်ထက်မိုးဦးက သတင်းထောက်ကို ပါးရိုက်တယ်၊ လည်ပင်းညှစ်ပြီး ကုတ်ဖဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအမှုက ဒါဏ်ငွေ တစ်ထောင်ပဲ ပေးရတယ်။ အခု ရွှေလာရောင်းသူ ရတဲ့ဒါဏ်ရက ၁၀ဆ ပိုဆိုးသလား။ ဒါဆို ဒါဏ်ငွေ တစ်သောင်း။ အဆတစ်ရာ ပိုဆိုးသလား။ ဒါဆို ဒါဏ်ငွေ တစ်သိန်းပေါ့။ ထောင်ဒါဏ် ၁၄နှစ်ဆိုတာတော့ လုံးဝ မတရားမှုပဲ။
တကယ်ဆို ရွှေလာရောင်းသူက ဆူပူအောင်လှုံ့ဆော်သူဖြစ်တယ်။ ဆူပူအောင် လှုံ့ဆော်ပြီး ရွှေဆိုင်ကို ဝိုင်းဖျက်တယ်။ အဲ့ဒီ ရွှေလာရောင်းသူကိုရော ဘယ်လို အရေးယူလဲ သိချင်တယ်။ ဆိုင်တွေကို ဝိုင်းဖျက်ကြတဲ့လူတွေကို ဘယ်လို အရေးယူမလဲ သိချင်တယ်။ အိမ်တွေ မီးရှို့ ဖျက်ဆီး၊ ဗလီတွေ မီးရှို့ ဖျက်ဆီး တဲ့ လူတွေကို ဘယ်လို အရေးယူမလဲ သိချင်တယ်။ အပြစ်မဲ့ ကျောင်းသားငယ်လေးတွေကို ဓါးနဲ့ပိုင်း မီးထဲ့ပစ်ထည့်တဲ့ လူတွေကို ဘယ်လို အရေးယူမလဲ သိချင်တယ်။
နောက်ပြီး နောက်ကွယ်က မီးမွှေးပေးခဲ့တဲ့ ၉၆၉တွေ။ မွတ်ဆလင်မ်တွေအပေါ် မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံ စွတ်စွဲ ဟောပြောနေသူတွေဟာ နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင် တကယ့် ရာဇဝတ်မှု အကြီးကြီးတွေ ကျူးလွန်ခဲ့ကြတာ။ သူတို့ကိုရော မြန်မာ့ စံနဲ့ ဘယ်လို အရေးယူမလဲ သိချင်တယ်။
ဪမြန်မာ့တရား စီရင်ရေး။ အောက်တန်းကျ ယုတ်မာတဲ့ လူတွေက တရားသူကြီးဖြစ်နေမှတော့။။။။။။။။။
Source>>>Daythanix Chann's status.
Htet Paing Kyaw လူတယောက်ကို ကြက်ကလေးငှက်ကလေးလို ၀ိုင်းပြီးခုတ်သတ်နေတဲ့လူတွေကို ဗီဒီယိုဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေရှိရဲ့နဲ့ မဖမ်းပဲ..လွှတ်ပေးထားတာကလည်း မျှတတဲ့စီရင်မှုပဲလား
My comment>>>Wira Thu led 969 Bloody Monks had incited, planned, led ans participated in Meikhtila Muss-Murders of Muslims. This is reported in Myanmar and International Media. But Shameless Mandalay PM and Myanmar President failed to even arrest ONE monk. These two persons shouls be arrested for negligence to prevent that GENOCIDE. It is their duty to protect the minority. Omission of DUTY isacrime. Police and security forces under them fail to stop the mass murders and destruction of Muslim properties and religious places. Under the COMMAND RESPONSIBILITY law of ICC under UN these two persons are responsible.
The most prominent one was the pic of damaged (destroyed) mosque with the damaged Wazu place (Wuduk place) showing the damaged water well as if underground store room suspected to be storing weapons. He incited the gov and Bama Buddhists to check on all the Masjids in Myanmar.
I hope ALL the Muslim Organizations and capable Muslims should force the government to reveal that NASTY CRIMINAL Cyber-trooper. Please made multiple police reports on him.
Thant Zin Htun said>>> If they check the masjid,no underground nor weapons will be seen. If anyone willing to see weapons in religious place, just takealook at "Phayar Zaung dan"(the stair cases of Pagoda). You will see various weapons like long armed sword called "Hnat Kyee Taung" being sold legally in cheap price.
I have given WARNING TWICE to Hmuu Zaw & U Ye Htut on their FB wall to control the government Cyber-troopers.>>>Severe warning to Hmuu Zaw and U Ye Thut,
Please kindly control your Cyber-troopers from defaming me with lies. If you fail to control them two of you will be held responsible.
If anything happen to me, my relatives and friends, two of you would be definitely pulled to ICC and punish accordingly.
Be careful, INTERPOL could arrest two of you once you two stepped outside Myanmar and if government changed, two of you could be extradited from Myanmar.
အောက်တန်းကျတဲ့ လဥ မောင်ကာဠု ..ကိုယ့်ကိုကိုအောက်တန်းကျကြောင်းသက်သေပြ
ဘင်္ဂလီကျူးကျော်သူများကို တားဆီးဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့'s page which was deleted by FB authorities @
It was repeated to publish again on Ludu Mg Karlu Web site (GOVERNMENT WEB SITE) I reported and give second warning to control them on Mhuu Zaw and Ye Htut's FB walls. This morning that one disappeared but on that he asked his fB friends to copy on paste on their wall as I may repeat reporting and delete that posting @ http://www.facebook.com/photo.php?fbid=471914276212643&set=a.446173832120021.95845.446125985458139&type=1
ဒီပုံကို ကျနော့်သူငယ်ချင်း Ye Aung Thu ဒီနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက အုတ်ဖိုမြို့မှာ ရိုက်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ တူတူ ဒီနေ့ ဒီနေ့ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်တဲ့ နေရာတွေသွားခဲ့တယ်။ အခြေအနေတွေကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်တယ်။
ပြန်မပြောချင်လောက်တဲ့ ခံစားမှုတခု ဒီနေ့ရခဲ့တာမို့ ကျနော် ပို့စ်တွေ ဓါတ်ပုံတွေ မတင်ပဲ ဒီအတိုင်း နေခဲ့တယ်။ အခု လူထု မောင်ကာဠုဆိုတဲ့ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ အောက်တန်းစားတကောင်က ကျနော့်သူငယ်ချင်းရဲ့ Creation ကို ဘာသာရေးလူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်ဖို့ လှုံ့ဆော်တဲ့ ပို့စ်မှာ သုံးထားတာတွေ့ရတယ်။
Ye Aung Thu + AFP ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဒီဓါတ်ပုံ ဥာဏပစ္စည်း (intellectual properties) ကို ဘာ ခရက်ဒစ်မှ မပေးပဲ ခိုးသုံး ထားတယ်။
ဒီအပေါက်က ရေတွင်းပါ။ ဗလီပျက်ထဲမှာ ကျနော်ကိုယ်တိုင် အောက်ငုံ့ကြည့်ခဲ့တယ်။ ရှေးရေတွင်း အဟောင်း အဝိုင်းပုံကို အပေါ်က ခင်းပြီး အဖုံးလုပ်ထားတာ။ အဖုံးက မရှိတော့ဘူး။
အနောက်မှာ အုတ်ခုံလေးတွေ တွေ့လား။ အဲ့တာ ရေဘုံပိုင်တွေ။ အကုန်ရိုက်ချိုးဖျက်စီး ခံထားရပြီးပြီ။ ရေတွင်းထဲကရေကို ရေစုပ်ဆက်နဲ့တင်ပြီး ရေတိုင်ကီကတဆင့် ရေဘုံပိုင်တွေ သွယ်ထားတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ ရေသွယ်တဲ့ စနစ်ပါ။
ထိုင်နေတဲ့ လူဘေးမှာ နေထိုးနေတဲ့ အကွက်တွေ မြင်ရလား။ အမိုးရှိတဲ့ နေရာတခုမှာ ဒီလိုနေရောင် အကွက်တွေ ထိုးနေတာ အဲ့ဒီအမိုးက ဘာဖြစ်နေလို့လဲ။ ဦးဏှောက်နဲ့ စဉ်းစားပါ။ ကျနော်ဒီပို့စ်ကို မရှဲခင် အဲ့ဒီခွေးသူတောင်းစား တင်ထားတဲ့ ပို့စ်ကို သွားကြည်တေ့ာ့ ဆဲထားတာ ဒုနဲ့ဒေး။ ရှဲထားတာ ၅၂၀ ကျော်ပြီ။ ဘုရား ဘုရား။ ဒီမှိုင်းက ဘယ်လောက်များ ရောက်ပြီး ဘယ်လောက် ကျယ်ပြန့် သွားပြီလဲ။
နေအိမ်တခုလုံးအပြင်၊ ကိုးကွယ်ရာ နေရာတခု ဖျက်ဆီးခံရလို့ သူ့ဘာသာ ခံစားနေတဲ့ လူတယောက်ကို ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လောက်အထိများ အောက်တန်းကျကျ ထိုးနှက်ချင်သေးလဲ။
ပြောသာပြောရတယ်။ လမ်းဘေး ခွေးတကောင်ကို အောက်တန်းမကျနဲ့လို့ သွားပြောရင် ခွေးက လူစကားနားလည်မယ် မထင်သလို ပြန်ဟောင်ဖို့ပဲ ရှိတာပဲ။
ကျနော်ရေးတဲ့ ပို့စ်ကို လာဖတ်တဲ့ သူတွေကို တခုပဲ ပြောချင်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သံသယမျက်လုံးကို ပိတ်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ အမြင်နဲ့ ကြည့်ပါ။ ခင်ဗျားတို့ ဦးဏှောက်တွေက ထမင်းစားပြီး ကြီးထွားလာတာဆိုရင် ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်တဲ့ အလေ့အထလေး လေ့ကျင့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။
နောက် အချက်အလက်တွေကို ကိုယ်တိုင် စူးစမ်းပြီးမှ Share လုပ်ဖို့လဲ ကျနော် မေတ္တာရပ်ခံချင်တယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက် ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် (ဒီနှစ်) မှ စဖွင့်တဲ့ ဒီ ကာဠုဆိုတဲ့ အကောင့်က ၁ လနဲ့ ရက် ၂၀ အတွင်း like ၉ ထောင်ကျော်ရအောင် ဘယ်လိုများ လုပ်သွားသလဲဆိုတာ သူ့ပို့စ်တွေ သွားကြည့်ရင် ခင်ဗျားတို့ နားလည်မှာပါ။
မှန်ရာကို မှန်တဲ့အတိုင်းပြောတာ ဘယ်လူမျိုး ဘယ်ဘာသာရေးဘက်မှ လိုက်စရာမလိုဘူး။ ကိုယ့်အဖေအမေ အဆင့်အတန်းပြချင်လို့ ဆဲတဲ့ကောင်တွေလည်း ဂရုစိုက်နေမှာ မဟုတ်ဘူး။ မြေတိုက်ခန်းဆိုတာ သေချာလို့ သွေးရှိရင် လည်ပင်းဖြတ်ကြေး လောင်းမယ်။
Myanmar Muslim Net shared Lynn Bobo's photo.
Posted: 12 Apr 2013 11:15 PM PDT
Dalam pada itu, Mustafa cuba mengelak daripada berdepan pihak media selepas majlis selesai, sebaliknya berkata "sudah-sudah saya dah beritahu, saya tak nak cakap apa-apa, saya dah serah kepada peguam, itu saja dan tidak berbaloi kalau saya bagi komen.
" Selepas itu, Mustafa masuk ke dalam kenderaannya dan beredar.
Posted: 12 Apr 2013 07:50 PM PDT
Posted: 12 Apr 2013 08:34 PM PDT
"သမိုင်းတကွက် အမည်းစက်စွန်းခဲ့ပြီ" By စံကွန့်
မြန်မာ့သမိုင်းကို လွတ်လပ်ရေး ရပြီး သည်ဖက်ခေတ်တလျှောက်လုံး ခြုံငုံသုံးသပ်ရင် … စစ်အစိုးရနဲ့ ကင်းလွတ်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကနည်းနည်းမို့ စစ်အာဏာရှင်များ ကြီးစိုးသည့်ကာလလို့ ခေါ်ရင် မမှားပါဘူး။ ခုထိအောင်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သိန်းစိန်က အရပ်သားအစိုးရပါလို့ ပါးစပ်က ဘယ်လောက် အော် အော် ပြည်သူလူထုကတော့ အရပ်သားအယောင်ဆောင် ယူနီဖောင်းချွတ် စစ်အစိုးရလို့ပဲ နားလည်ထားပါတယ်။ စစ်အစိုးရဟာ နာမည်တွေ ဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်း တံဆိပ်တွေ ဘယ်လိုပဲပြောင်းကပ်ကပ် ပြည်သူလူထုရဲ့ ချစ်ခင်ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ဘယ်တုန်းကမှ မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါ ဘာကြောင့်လဲ။
ရာစုနှစ်တဝက်လောက် အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရဟာ ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားထက် သူတို့ရဲ့ စစ်တပ်အကျိုးစီးပွားကို ရှေ့တန်းတင်ခဲ့ပြီး ဝေဖန်ဆန့်ကျင်သူမှန်သမျှ ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်ကွပ်ခဲ့တယ်။ ၆၂ ဇူလိုင် ၇ ရက် အရေးအခင်းမှာ ကျောင်းသားတွေ သွေးမြေကျခဲ့ရတယ်။ ၈၈ မှာ အကြီးကျယ်ဆုံး ဆန္ဒပြမှုကြီးကြောင့် ပြည်သူထောင်နဲ့ချီပြီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ၂၀၀၇ မှာတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကို မရှုစိမ့်နိုင်တော့တဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေ လမ်းပေါ်ထွက်မိရာက စစ်အစိုးရရဲ့ နှိပ်ကွပ်ခြင်းကို ခံလိုက်ကြရတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ကိုးကွယ်အားထားရာ ရဟန်းသံဃာတော်တွေ သွေးမြေကျခဲ့ရတဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ ရာဇဝင်တွင်မယ့် အမည်းစက်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုသူများဟာ ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာ မမျှော်လင့်တဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကြုံတွေ့ခဲ့လို့ အသက်အိုးအိမ်များ ဆုံးရှုံးခဲ့ရင် အပြေးအလွှား လာပြီး ကူညီဖြေသိမ့်ပေးကြတာ ဓမ္မတာပါ။ ၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီး မြန်မာပြည် ဝင်မွှေသွားတော့ လူတွေ သိန်းနဲ့ချီပြီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုသူများ မပေါ်လာတဲ့အပြင် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားပြီး ကူညီကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံအစိုးရတွေကို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်။ မုန်တိုင်းကြောင့် ဝရုန်းသုန်းကားဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေဆိုးကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး သူတို့သိပ်လိုချင်တဲ့ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုခဲ့တယ်။
အဲသည်လို သမိုင်းမှာ အမည်းစက်တွေ ဗလပွနဲ့ ချီတက်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရဟာ "သန်းများတော့ မယား" ဆိုသလို ရခိုင်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခ၊ လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စ၊ ခု မိတ္ထီလာအဓိကရုဏ်း၊ ဒါတွေက ဘယ်လိုမှဖျောက်မရတဲ့ စစ်အစိုးရသက်တမ်းတလျှောက် စွန်းထင်ခဲ့တဲ့ အမည်းစက်တွေပဲ မဟုတ်ပါလား၊ သမိုင်းတလျှောက် စွန်းထင်ခဲ့တဲ့ အမည်းစက်တွေကို ဘယ်စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ကမှ တာဝန်ယူခြင်း၊ တာဝန်ခံခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး၊ မရှိတဲ့အပြင် စစ်အစိုးရကို ခါးခါးတူးတူး မုန်းတီးနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို အခု စစ်အစိုးရ မရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီး ဇွတ်အတင်းအဓမ္မ အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အကာကွယ်ယူ၊ မဲလိမ်မဲခိုးပြီး "ဒို့နိုင်တယ်" လုပ်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပြည်သူကို လိမ်လည်လှည့်ဖျားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရကို ရွှံရှာတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အမုန်းတရားကတော့ တစက်ကလေးမှ မလျော့ပါဘူး။ တိုးလို့သာ ဆိုးလာတဲ့ စစ်အစိုးဟာ ကိုယ်တိုင်ခေါင်းမခံတော့ဘဲ "ဦးပိုင်" ဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့လူတစုနဲ့ လယ်တွေကို သိမ်းလားသိမ်းရဲ့ ၊ သယံဇာတတွေ ရောင်းလားရောင်းရဲ့။ ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး အာဏာလက်ဆုပ်မဖြေချင်တဲ့ စစ်အစိုးရဟာ သူတို့အာဏာ ဆက်လက်ကြာရှည်ဆုပ်ကိုင်ဖို့ "ပြောင်းပါပြီ" ဆိုတဲ့ အသံကျယ်ကျယ် ဟစ်ပြီး အာဏာကိုတော့ ဘယ်လက်ညောင်းလို့ ညာလက် "ပြောင်း" ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ လူကတော့ ဒီလူဒီလူပါပဲ။
င်္နိုးကြားတက်ကြွပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ စစ်တပ်အကြောင်း နောကြေအောင် သိတဲ့လူတွေက မယုံပါဘူး။ လုပ်စားကိုင်စား နိုင်ငံရေးပါတီအချို့နဲ့ မြန်မာစစ်တပ် ယုတ်မာပုံအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိဟန်မတူတဲ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကြီး ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က "ဦးသိန်းစိန်ကို ယုံပါတယ်" လုပ်လိုက်တော့ စစ်တပ် လက်ခမောင်းထခတ်တော့တယ်။
ဒီနေရာမှာ ကြားဖြတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားဆိုသူအချို့အကြောင်း နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရေးသမား အတော်များများကို "ဝယ်" လို့ရပါတယ်။ အကုန်လုံးကို မဆိုလိုပါ။ တချို့က ဝီစကီတလုံးနဲ့ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ တချို့က မိုဘိုင်းတလုံးနဲ့ …၊ တချို့က တိုက်ခန်းလေး၊ မြေကွက်လေး …၊ တချို့ကျ ဈေးကြီးကြီးပေးပြီး ရာထူးလေး၊ နေရာလေးနဲ့ ဝယ်ရင်ရသပေါ့လေ။ ဘာနဲ့မှ ပေးဝယ်လို့မရတဲ့ ရဲရဲတောက် နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အရေအတွက်အားဖြင့် နည်းသပေါ့လေ။ (ဥပမာ) ဦးဝင်းတင်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုး။
ဒေါ်စုကို ဝယ်လို့ရပြီဆိုတာနဲ့ သူတို့ လက်စွမ်းပြပါတော့တယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စကို မီးလောင်ဗုံးနဲ့ ရှင်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ ဂန္ဒီလမ်းစဉ်ကို ကြိုက်လှချည့်ရဲ့၊ အကြမ်းနည်းဆို လေသံမှ မကြားချင်လှတဲ့ ဒေါ်စု၊ ပြသာနာကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းရမယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်စု၊ ဆရာတော် သံဃာတော်တွေ အသားနီလန်ပြီး မကြည့်ရဲ၊ မကြည့်ဝံ့စရာအဖြစ်ကို ဒေါ်စု ရေငုံနေခဲ့တယ်။ အပိုင်ဝယ်ပြီး ချည်ပြီးဖြစ်တဲ့ စစ်အစိုးရက သိပ်သေချာယုံကြည်ပြီးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စုကို ကော်မရှင်ဥက္ကဌခန့်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးခိုင်းလိုက်တယ်။ အဖြေက စီမံကိန်းဆက်လုပ်၊ မီးလောင်ဗုံးမဟုတ် မီးခိုးဗုံး၊ ရဲတွေက နာစေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့မဟုတ်၊ မကျွမ်းကျင်လို့၊ သင်တန်းနည်းနည်းပေးဖို့ လိုနေလို့၊ တာပေါ်လင်နဲ့ ထိလို့ မီးလောင်တာ။
ပြည်သူတွေ နှလုံးစိတ်ဝမ်းညှိုးခြုံးကြေကွဲရတယ်။ မြန်မာ့သမိုင်း အမည်းစက်ကြီး စွန်းထင်ခဲ့ရတယ်။ ဒီမိုကရေစီတိုက်စစ်မှူးကြီး ခေါက်ဆွဲစားပြီ၊ ဂိုးထဲမကန် ဘေးကန်ပြီဆိုတာ ပြည်သူတွေ သဘောပေါက်သွားပြီ၊ ပြည်သူအကျိုးစီးပွားနဲ့ ဝမ်ပေါင်အကျိုးစီးပွား၊ နိုင်ငံအကျုိုးစီးပွားနဲ့ ဦးပိုင်အကျိုးစီးပွား၊ ဒေါ်စု ကွဲကွဲပြားပြား မသိတာ ထင်ရှားသွားပြီ။ ပြည်သူအကျိုးစီးပွား တမတ်ဖိုး၊ စစ်တပ်အကျိုးစီးပွား သုံးမတ်ဖိုး ဆိုတာကို ဒေါ်စု သိလျက်နဲ့ "၂၀၁၅ အိပ်မက်ကြောင့်" လို့ ပြည်သူတွေက သံသယရှိလာပြီ။
လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စက အပျက်ပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်နိုင်တယ်ဆိုတာ အတွေ့အကြုံအရ စစ်ဗိုလ်လူထွက်တွေ သိတယ်။ လူထုကို အာရုံပြောင်းချင်တော့ ရှေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ကုလားကို ထိုးကျွေးလိုက်တယ်။ ဒါ စစ်အစိုးရ သုံးနေကျ ဆေးမြီးတို၊ တိုင်းပြည်မှာ အခက်ခဲအကျပ်အတည်းတခု ကြုံလေတိုင်း မူဆလင်ဘာသာဝင်တွေ ဘုရားသာ တပေတော့။ မိတ္ထီလာအရေးအခင်းဟာ တမင် သွေးရိုးသားရိုးအတိုင်း ဖြစ်လာတဲ့ အရေးအခင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အရပ်သားရော အဖွဲ့အစည်းပိုင်းကပါ ပြောနေကြပြီ။ ဒါဖြင့် ဘယ်သူလဲ၊ အရေခြုံစစ်အစိုးရ မလှုပ်ရဲပြီ၊ ပုပ်သင်ဥ ပေါ်မှာ ကြောက်တော့ ညောင်မြစ်ကို မတူးရဲ။ တောင်ကုတ်မှာ မူဆလင် ၁၀ ယောက် အသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စ၊ စစ်တွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူပေါင်းများစွာ သေကြေဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်း နှစ်ပေါက်တဲ့အထိ အစီရင်ခံစာ ထွက်မလာ၊ ဖင်ကြားခဲညှပ်နေပြီ။
ရခိုင်အရေးအခင်းရော မိတ္ထီလာအဓိကရုဏ်းရော စစ်အစိုးရ မဖန်တီးဘဲနဲ့ စစ်အစိုးရ ဘက်မလိုက်ဘဲနဲ့ စစ်အစိုးရ "ဟ" မပေးဘဲနဲ့ ဒါလောက် ကြီးကျယ်သွားစရာ အကြောင်းမရှိ၊ ရွှေဆိုင်မှာ ရောင်းသူဝယ်သူ အချင်းများရာက လူအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် မြောက်မြားစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိပါသလဲ။ ကြီးကျယ်လှတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ရခိုင်အရေးအခင်း အတွေ့အကြုံရှိလျက်နဲ့ နောက်ထပ် မိတ္ထီလာအရေးအခင်းကို နိုင်နင်းစွာ မကိုင်တွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ရိုသေစွာပြောပါရစေ၊ ဦးသိန်းစိန် နှုတ်ထွက်ပါတော့။
သူတို့ နိုင်နင်းစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်လို့ အဓိကရုဏ်းကို ရှောင်ကွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ သာဓကတခု မကြာသေးသော နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ကြုံခဲ့ပါသေးတယ်။ မန္တလေးကျောက်ဝိုင်းမှာ ဗမာစကားတလုံးမှမတတ်တဲ့ တရုတ်တွေနဲ့ဗမာကျောက်ပွဲစား ရန်ဖြစ်ကြတယ်။ ဗမာပွဲစား အထိုးခံလိုက်ရပြီး တရုတ်တွေကိုတော့ ရဲက ချက်ချင်း ကယ်ထုတ်သွားခဲ့တယ်၊ မှဲ့တပေါက် မစွန်းရပါဘူး၊ အကာအကွယ်ပေးဖို့လိုတဲ့ လူကျ ချက်ချင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်ပြီး မိတ္ထီလာမှာတော့ ဒုတ်တဝင်းဝင်း၊ ဓားတဝင်းဝင်း လုကြ ယက်ကြ သတ်ကြ ဖြတ်ကြတာကို ကိန်းဂဏန်း လေးဆယ်ကျော်ရောက်တဲ့အထိ အဖြစ်ခံကြတာ စံကွန့်တော့ နားမလည်နိုင်ဘူး။
ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း မဆိုထားနဲ့ သာမန်ဘောလုံးပွဲတပွဲမှာတောင် ပွဲကြည့်သူချင်း ရန်ထဖြစ်ရင် ပွဲမပျက်အောင် ဆုံးရှုံးမှု မများအောင် လုံခြုံရေးတွေ ရဲတွေ မီးသတ်တွေ ချက်ချင်း ရောက်လာရတယ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်ကြီးက ရဲချုပ်တို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးတို့လည်း သ်ိမှာပါ။
မြန်မာပြည်ဟာ မင်းမဲ့တိုင်းပြည်မဟုတ်ပါ။ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံတခု၊ စစ်တပ် ရဲ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း စနစ်တကျရှိတဲ့ နိုင်ငံတခု၊ ကျေးရွာ ရပ်ကွက် မြို့နယ် ခရိုင် တိုင်း အလိုက် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရှိတဲ့ နိုင်ငံတခု၊ ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဈေးရောင်းဈေးဝယ် အချင်းများရာက နိုင်နင်းအောင် မကိုင်တွယ်နိုင်ဘဲ အသက်အိုးအိမ် မြောက်မြားစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့မှာ မူဆလင် ၁၀ ယောက် နေခင်းကြောင်တောင်ကြီး အသတ်ခံလိုက်ရတာ ခုထိ တရားခံမမိဘူး။
ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ စံကွန့်တို့လူမျိုးကို အရိုင်းအစိုင်းတွေ သတ်ရဲ ဖြတ်ရဲ လုယက်ရဲ တဲ့ လူတွေလို့ ကမ္ဘာကမြင်မှာ စံကွန့် သေမလောက်ကြောက်ပါတယ်၊ အာဏာလက်ဆုပ်မပြေချင်တဲ့ အာဏာ အဝိဇ္ဖာဖုံးနေတဲ့ လူတစုရဲ့ အစီအမံအကြံဥာဏ်ကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေသေရ၊ လူမျိုးနာမည်ပျက်ရနဲ့ သြော် … သမိုင်းတကွက် အမည်းစက်စွန်းခဲ့ပြီကော။